नायिका रेखा थापाले हानेको लोलाले को भए घाईते ?होलीको दिन रेखा थापाले कसलाई कुटिन ? भिडियो सहित – Complete Nepali News Portal
नायिका रेखा थापाले हानेको लोलाले को भए घाईते ?होलीको दिन रेखा थापाले कसलाई कुटिन ? भिडियो सहित
Kamal Sargam March 2, 2018
बिहीबार देशका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरुमा होली उत्साहका साथ मनाईएको छ । राजधानीको बानेश्वरमा कलाकारहरुले पनि होली विशेष रुपमा मनाएका छन् ।
कुन कलाकारको होली कस्तो रह्यो हेर्नुहोस् यो भिडियो ।